शंखमुल किरात वंश कै थियो र च्यासल किराती समुदायसँग सम्बन्धित छ : एक बहस – सुमन बाङदेल «
शंखमुल किरात वंश कै थियो र च्यासल किराती समुदायसँग सम्बन्धित छ : एक बहस – सुमन बाङदेल
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७७, शनिबार २२:५४
च्यासल नेपालको ललितपुर जिल्लाको पुरानो शहर हो । र, आजसम्म पनि ललितपुर सहरको एक खण्डको रुपमा रहेको छ । किरातीहरु काटिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासकार/जानकारहरु बताउँछन। यो प्राचिन शहरको बिषयमा ऐतिहासिक एक बहस गर्ने प्रयास गरेको छौ । च्यासल नामको ठाउँहरुमा मिथ्या र रहस्यहरु उतिकै छन भने इतिहासकारको मत पनि बाझिएको छ । ईतिहासकार र जानकारहरु भन्छन , ‘लिच्छवी सेना र किरातहरुकाबीच युद्ध भएको थियो । शंखमुल किरात वंश कै थियो ?’ (शंखमुल भन्नाले पुरानो पाटनलाई जनाउछ) च्यासल किराती समुदायसँग सम्बन्धित छ कि छैन भने केहि तथ्य सहित कुरा गर्दै छौ । भाषिक, ऐतिहासिक्, पुरात्वबिद र समाजशास्त्रीय तथा मानबशास्त्रीय दृष्टृकोणबाट छलफल र बहस गरी अघी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
इतिहासबिद जय सिवाहाङका अनुसार ‌यस देखिएको लिङ्ग गााडिएका चारकुनाले घेरिएकाे क्षेत्रमा ईनार छ, जहाँ ८०० (आठ सय) किरातहरुलाई साेम वंशीहरुले हत्या गरेर ईनारमा खसाईएकाे स्थान हाे । यसैकाे नाममा च्यास (आठसय ) नेपाल भाषाले जनाउँछ । आज च्यासल भनिन्छ ।
यी किरातहरु शंखमुले किरातका सन्तान हुन । जयस्थिति मल्लकाे समयदेखि त्यहाका किरातीहरुलाई त्यपे / तेप्य भनिए । नेपाल भाषामा तेप्य भनेकाे घैटाे हाे । हत्या गरिएका किरातरुका स-साना नानीहरु घैटाेमा लुकेर वसे । घैटाेबाट निस्कनु पुनरजन्म हाे । अतः पुनरजन्म भएकाहरुकाे अर्काे जातथर हुने भए । याे पूर्वका किरातहरुसंग परम्परा संस्कृतिक मेल खान्छ ।
पाटनका राजा सिद्दिनरसिंह मल्लले च्यासलका तिप्य मैचा (केटी) प्रेम विवाह गर्याे । तब साह्रै मीठाे व्यानजन वनाउने हुनाले व्यानजनकार जात थर दिएकाेले हाल पनि व्यन्जनकार नै भनिन्छन । याे राजा सिद्दिनरसिंह मल्लले दिएकाे थर जात हाे। व्यान्जन्कारहरुले उत्पादन गरेकाे पालुङगाे अति प्रशिद्ध हरेक नेवार संस्कृतिमा हुन्छ । त्यस समयमा व्यानजनकारहरुकाे पेशा कृषि नै थियाे ।
आज माली भनिन्छन, तिनीहरु शंखमुल किरात वंशका हुन । जयस्थिती मल्लका समयमा मालीले मात्र फुलमाला उत्पादन गर्ने जाती । थर भएका हुन । त्यस समयमा विद्रोह गर्ने किरातहरु च्यामे र पाेडे पनि वनाइए । अतः आज व्यान्जनकारहरु जनसंख्या धेरै न्यून छन।
‌आज पनि व्यन्जनकारहरुका हाेटेल पसलहरुमा काठमाण्डाै, भक्तपुर, वनेपा, कीर्तिपुरवाट व्यान्जनकारका पाक विज्ञान अध्यान गर्न र चाख्न ग्राहक आउंछन। ठूलै भिड व्यन्जनकार पसलमा देखिन्छन । कथन छ, पाटन मंगल वजारमा एउटा सुरुङ छ, त्यहाँ नागमणि खाेज्न जानु अगाडि मंगल वजारकाे उतरमा मणि गणेश (चार हाते ) रहेकाे छ। त्यहाँ पुजा गरेर किरात र अन्य जनताहरु मणि खाेज्न जान्थे ।
किरात राजा शंखहाङका मुन्दुम सामानहरु र वुद्धका अनुयायीहरु वज्रचार्यहरुवीच तन्त्रद्वन्द्व हुँदा चावल पटुककाे राजदरवार नजिकै थुपारे। त्यहाँबाट अरिगाल उत्पन्न भएर पटुक दरवारमा दु:खदिन थाले । त्यस समयमा पाटनमा चार ठूलाठूला ढाेकाहरु थिए ।
राजा पटुककाे दरवारकाे भग्नावशेष आज पनि एउटा ढिस्काे छ, त्यही नै पटुककाे दरवार थियाे । उदाहरणको लागी पाटन ढाका, ग्वर्काे, लगनखेल, पुलचाेक आदि। किरातहरुका माटाका बन्दुक, मालिङगाेकाे वासवाट निर्मित धनुषवाण, खुकुरी, खुडा-तरवारले साेमवंशीलाई राेक्न नसकेर चारढाेका फाेरे, तब किरातहरु पूर्व लागे । अर्कोतिर किरातहरु धेरै सोझा र ईमान्दार भएकोले खासै युद्धको तयारी थिएन ।
च्यासलमा रहेकाे किरातिहरुकाे समाधि ईनारमाथि रहेकाे शिवलिङ्ग ।
पटुक राजाकाे नामवाट पाटन वन्याे । किरातहरुका विछाेडिएका सन्तान नै व्यान्जनकार हुन। ईतिहासमा आज पनि प्रमाण छन, लगनखेल र ईमाडाेल जानेवाटाे ग्वार्काे पूर्वका लगायत ४ स्तूप (थुर) निर्माण हुँदा सम्राट अशाेकले किरात कालिगढ र ज्यापू महर्जनहरुलाई लगाएका थिए।
डेस्टिनेसन डटकमका अनुसार एकजना साथिले च्यासलको बिषयमा स्थानीयलाई सोध्दा यसो भने ‘ढुङ्गाको प्लेटफर्ममा औंल्याए देखिए र उक्त मान्छेले हामीलाई भन्यो, ८०० मानव टाउको गाडिएको छ। ठाउँको नाम बाहेक कुनै प्रमाण छैन, जुन ‘च्यास’ बाट आएको हो, जसको अर्थ नेवारीमा ८०० छ।’
आज माली भन्छिन, तिनीहरु शंखमुल किरात वंशका हुन । जयस्थिती मल्लका समयमा मालीले मात्र फुलमाला उत्पादन गर्ने जाती थर भएका हुन । त्यस समयमा बिद्रोह गर्ने किरातहरु च्यामे र पाेडे पनि वनाइए । अतः आज व्यान्जनकारहरु जनसंख्या धेरै न्यून छन।
डेस्टिनेसन डटकमका अनुसार एकजना साथिले च्यासलको बिषयमा स्थाननीयलाई सोध्दा यसो भने ‘ढुङ्गाको प्लेटफर्ममा औंलाले देखाउदै उक्त मान्छेले हामीलाई भन्यो, ८०० मानव टाउको गाडिएको छ। ठाउँको नाम बाहेक कुनै प्रमाण छैन, जुन ‘च्यास’ बाट आएको हो, जसको अर्थ नेवारीमा ८०० छ।’
अर्कोतर्फ, इतिहासकारहरुका अनुसार २५० इसबी सम्बतको आक्रमण च्यासलमा आक्रमणकारी लिच्छवी सेना र किरातहरुकाबीच काठमाडौं उपत्यकाका शासकहरुबीच भएको थियो। नाममा ‘८००’ ले किरात योद्धालाई संकेत गर्दछ, जुन उनीहरूको शहरको रक्षा गर्दछ। यसबाट निष्कर्ष गर्न सक्निछ, यहाँ लिच्छवी सेना र किरातहरुकाबीच युद्ध भएको हुन सक्छ ।
लोक कथा यस्तो छ :
लोककथाका अनुसार किराती शासकहरूका दरबारहरूले नियमित रुपमा दरबारमा व्यक्तिहरुलाई बोलाएर यातना दिए, कहिलेकाहिँ उनीहरुलाई मार्ने क्रममा पाटनवासीहरुलाई सताउँथे।
च्यासलकोमाथिबाट देखिने दृश्य डेस्टिनसनडकमबाट लिएको फोटो ।
एक दिन, उनीहरूले सुनहरा मन्दिरको केट पुजारीलाई उनीहरूको दरबारमा बोलाए। यसले मन्दिरको देवतालाई रीस उठायो जसले छोरालाई महलमा धानको अन्नको ठूलो मात्रामा बोक्न निर्देशन दिए। दरबारको अगाडि अन्तिम चौबाटोहरूमा प्रत्येक अन्न दाना माहुरीमा परिणत भयो र यो ठूलो झुण्ड दरबारमा प्रवेश गर्‍यो, क्रूर दरबारहरूलाई खोज्दै, जुन सबै दिशामा भागे र ८०० टाउकाहरू ती मानिसहरुका हुन् भन्छन् जुन मौरीले मारेका थियो ।
थप बुझका लागी तलको युट्युब भिडियोबाट प्रष्ट्र हुन सकिन्छ ।
अर्को लोक बिश्वास:
हामिसँग कुनै मृत्युको प्रमाण वा यो कसरी आएको हो वा भएको थियो, एथेष्ठ प्रमाण छैन ? अस्तित्वमा नहुन सक्छ तर च्यासलमा समृद्ध सांस्कृतिक जीवनका प्रशस्त अवशेषहरू छन्, जुन किरातीसँग सम्बन्धीत देखिन्छ । ती मध्ये एक गजालक्ष्मीको ढुङाको मूर्ति हो, जुन विक्रम सम्बतको प्रथम शताब्दीदेखि वर्गको पानी टुप्पोलाई आशिष् दिएको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
विकिपेडिया डटकम का अनुसार यो प्राचीन शहर पाटन शहरको उत्तर पोष्ट, किरात र लिच्छविसहरूको लागि अन्तिम रणभूमि थियो। लगभग २५० इस्बी पुर्ब्, लिच्छवीसले यस पोष्टमा आक्रमण गरे जुन पोष्टमा पहरा दिइरहेका ८०० किरात थिए। यो पाटन दरबार स्कायर (पाटन दरबार) को उत्तरमा ५०० मिटरको दूरीको बारेमा स्थित छ र बागमती नदीमा समाप्त हुन्छ।
यो अज्ञात देवताको बराबरको पुरानो मूर्तिले फ्ल्याक गरेको छ (अनुहार पूर्ण रूपले मेटाइएको छ, जबकि गुंडाइएको सर्प शरीरहरूले विष्णु हो, भन्छन्)। यसको उमेर यस तथ्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि समय बित्दै जाँदा मानिसहरूले मुट्ठीभर पानी मात्र छर्लंग पारेर यसको केही अंश पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको छ। च्यासलमा अर्को अनुपम संरचना तीन-टाउको भएको गणेशको मूर्ति हो। (यो पछी हिन्दूकरण गरिएको हुन सक्छ)
स्थानिय बृद्ध बाबु रत्न अवलेयका अनुसार च्यासलमा चार भैरव मठहरू छन्। जसले एक क्षेत्र सीमांकन गर्‍यो जसको स्थानीयहरू मुँहासेमा प्रतिरोधी रहेको बताइएको छ। चारवटा तीर्थक्षेत्रमध्ये एउटा वर्गको दक्षिणतर्फ अत्यन्त श्रद्धालु र भयङ्करा छ।
यो सानो संरचना, जसमा एक आवाश्यक ढुङ्गा रहेको छ, स्थानीयहरूले यसलाई यत्तिको शक्तिशाली मान्दछन् कि हरेक वर्ष एक रातमा उनीहरूले गल्लीमा सेन्ट्रीहरू राख्छन् जसले गर्दा मानिसहरूलाई उनको डरलाग्दो स्वरूपमा भगवान् देख्नबाट रोक्न सकिन्छ। मूर्तिमा पवित्र पोष्ट टाँस्ने पुजारीले पनि आफ्नो पिठि फर्काएर त्यसो गर्छ। काठ र माटोको पुराना संरचनाहरू वरिपरि अग्लो ठोस घरहरूले घेरेको छ।
विकिपेडिया डटकम का अनुसार यो प्राचीन शहर पाटन शहरको उत्तर पोष्ट, किरात र लिच्छविसहरूको लागि अन्तिम रणभूमि थियो। लगभग २५० इस्बी पुर्ब्, लिच्छवीसले यस पोष्टमा आक्रमण गरे जुन पोष्टमा पहरा दिइरहेका ८०० किराती थिए। यो पाटन दरबार स्कायर (पाटन दरबार) को उत्तरमा ५०० मिटरको दूरीको बारेमा स्थित छ र बागमती नदीमा समाप्त हुन्छ।
नेवारी भाषामा ८०० को मतलब च्यासा हो र शहरलाई च्यासा नाम दिइएको थियो। पछि यसलाई च्यासल भनिन्छ। मध्य युगदेखि अहिलेसम्म “ब्याजनसकर” ले टेपे (नेवारी, नेपाली, साधारण टेपे) र कुमाह पनि “अवले” नाम गरेको शहर यस शहरमा बसोबास गर्दै आएका छन् र यस ऐतिहासिक ठाउँहरूको हेरचाह गरिरहेका छन्। शाक्य जस्ता अन्य जातिका ब्यानजंकर र अवाले व्यक्ति बाहेक श्रेष्ठ पनि यस स्थानमा बसिरहेका छन्।
किराती हिजो देखी नै सास्कृतिक रुपमा धनी थिए । च्यासल यसको संरक्षित, परम्परागत संस्कृतिका लागि प्रसिद्ध छ। यस स्थानका बासिन्दाहरूको मुख्य व्यवसाय भनेको कृषि र प्राचिन रुपमा गरिने ब्यापार व्यवसाय हो। आजकल, यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैछ र अधिक व्यक्तिहरू सेवा-आधारित व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्।
च्यासल हजारौं बर्षदेखि आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कारको संरक्षण गर्दै आएको छ। धेरै चाडहरू, पुरातन रीतिथितिहरू र प्राचीन विरासतहरू पनि संरक्षित छन् र संरक्षणमा सुरक्षित राखिन्छन्।
च्यासल हिटी/विकिपिडिय फोटो
यस शहरको आकर्षण ऐतिहासिक ढुस्तोने्गाको पानी, देवीदेवताका मूर्तिहरू, गणेश मन्दिर, पोखरी आदि हो। त्यहाँ तीनवटा अनुहारको गणेश मूर्ति (स्वपखवा गणेश) सहित दुईवटा मात्र मन्दिरहरू छन्। एउटा च्यासल सहिष्णुमा छ भने अर्को पुल्चोकमा रहेको छ ।
च्यासलको मुख्य बासिन्दा नेवार समुदायबाट ब्याजनजंकर, आवले, शाक्य, महर्जन, खड्गी र श्रेष्ठ नामका हुन्। तर ब्यानजणकरले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्।
माथीको सबै कुरा शष्लेषण र बिश्लेषनको आधारमा कुरा गर्दा शंखमुल किरात वंश कै थियो र च्यासल शब्द र च्यासल शहर किरातीसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । किराती समुदायले ३२ पुस्ता शासन चलाएकोले पनि कुनै समय च्यासलमा किराती थिए भन्ने आधार हो ।
अन्य श्रोत तथा संदर्भ श्राेत –
‌१) रामकृष्ण कर्मचार्य स्काउट सिक्षक महेन्द्र आदर्श उ मा वि (नि .मा.वि स्तर) तथा पत्रकार पुलचाेक ल.पु ।
‌२) प्रा. कृष्णवहादुर श्रेष्ठ नेपा भाषा पाटन संयुक्त क्याम्पस पाटन ढाेका ल.पु।
‌३) धर्मरत्न शाक्य नागवहाल सिक्षक महेन्द्र आदर्श उ.मा.वि (कलेज) सातदाेवाटाे ल.पु .।
‌४) समिता व्यानजनकार च्यासल वाैद्वक तथा व्यावसायी।
‌५) शान्ती च्यामे महेन्द्रआदर्श उ. मा.वि (कलेज) सातदाेवाटाे ल.पु.।
‌नाेट – रामकृष्ण कर्मचार्य अनुसार किरातकालिन फाेटाेहरु फाेटाे पत्रकार हरिवंश किरातसंग छ ।
६) इतिहासबिद जय सिवाहाङ, (siwahangjaya.wordpress.comबाट) ।
७) डेस्टिनसन डटकम ‘द लास्ट स्टाण्ड’ बाट ।
८) Wikipedia.com को ‘च्यासल’बाट ।
९) SUMNIMA THEATRE युट्युब च्यानलबाट ।